के दोष थ्यो अबोध बालकको ? चाउचाउ खान दिएर ह,त्या फूपुले गरिन यसरि बालकको ह,त्या -
के दोष थ्यो अबोध बालकको ? चाउचाउ खान दिएर ह,त्या फूपुले गरिन यसरि बालकको ह,त्या
१८ पुस । धनुषाको बिदेह नगरपालिकामा मृ,त अवस्थामा फेला परेका बालकको ह,त्या रकम लेनदेनका कारण ह,त्या भएको खुलेको छ । प्रहरीले प्रारम्भिक अनुस,न्धानबाट उनको ह,त्या नातामा फुपु पर्ने व्यक्तिले घाँटी थिचेर गरेको फे,ला पारेको छ । बिदेह नगरपालिका– २ दुहबी निवासी जीवन राय अमातका ५ बर्षीय छोरा अभिनन्दनको श,व ब्रम्हदेव राय अमातको भैंसी बाँध्ने गो,ठघरमा खाल्डो खनेर गा,डिएको अवस्थामा शुक्रबार बिहान फे,ला परेका थियो ।
ब्रम्हदेव मृ,तक बालकका हजूरबुवा पर्ने व्यक्ति हुने । घट,नाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा ब्रम्हदेवकी जेठी छोरी २६ बर्षीया प्रमिला देवी अमातले घाँटी थिचेर हत्या गरेको पाइएको धनुषाका प्रहरी प्रबक्ता मकेन्द्र कुमार मिश्रले जानकारी दिए ।
चाउचाउ खान दिएर ह,त्या -रकम लेनदेनको रिसइबीमा प्रमिलाले बालकको घाँटी थिचेर ह,त्या गरेको मिश्रको भनाइ छ । बालक अभिनन्दन गत पुस १५ गते बिहान ९ बजेतिर प्रमिला देवीको घर पुगेका थिए । त्यस क्रममा प्रमिलाले बालकलाई चाउचाउ खान दिएकी थिइन् । चाउचाउ खाइसकेपछि मध्यान्ह १२ बजेतिर सुत्छु भनेको र प्रमिलाले आफ्नो बुबा ब्रम्हदेव सुत्ने गरेको खाटमा सुताएकी थिइन् ।
बच्चा सुतिरहेकै अवस्थामा प्रमिलाले दुबै हातले घाँटी थिचेर उनको ह,त्या गरेको प्रहरी समक्ष स्वीका,रेकी छन् । ह,त्या पश्चात बेलुकी ६ः३० बजेतिर अँध्यारो भएपछि भैसी बाँध्ने गोठमा सानो खाल्डो खनेर गा,डेको प्रहरीले जनाएको छ । बालकको श,व खाल्डोमा राखेपछि प्रमिलाले सेतो सल र खरानीले छोपेकी थिइन् ।
घट,नास्थलमा पुगेको प्रहरीले तत्कालै प्रमिलालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्दा उनले आफूले बालकलाई ह,त्या गरेको स्वीकार गरेको प्रबक्ता मिश्रले बताए । प्रमिलाले आफूसँग बालकका आमाबुवाले पैसा लिएको र दिन नमान्दा आवेगमा आएर ह,त्या गरेको स्वीकारेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रमिलाले आफ्नो पैसा लिएको बताएपनि बालकका आमाबुवाले आफूहरुले उनीसँग कुनै पैसा नलिएको बताएका छन् ।‘बालकका अभिभावकले बरु हामीसँग नै प्रमिलाले रकम लिएको बताएका छन्’ मिश्रले भने, ‘घट,नाबारे अनुस,न्धान भइरहेको छ ।’
Previous न्याय माग्दै नवराज विकका बा–आमा काठमाडौंमा भौतारिदै
Next भारतीय सेनाले चलायो सिमामा गो,लि ,१ नेपालि युवक घा*ईते